Tuesday May 12, 2015 - 17:44:19 in Editorials by Super Admin
Xisbiga Waddani ayaa markii aan ka baxay 26 April 2015 ayay ahyid sababta goaankaasi igu sandulaysay anigoo ahaa asaasayaashi Xisbigaasi markii aan u arkay in u yahay xisbi halis ku ah maddaxbanaanidda, gooni isutaaga iyo qaranimada Somaliland. Tani waxay ka markhaati kacaysaa banaabax rabshadaha watay ee ka dhacay galbeedka Burco shalay ee Xisbigaasi ugu talagalay inuu khal khal ku galiyo nabdgalyada iyo xasiloonida ka jirta dalkeena. Asxaabata qaranku iyo masuuliyinta dalka waxaa looga fadhiiyaa inay dadkooda iyo dalkooda u tudhaan. Maqaalkanina waxaa u baxayaa suaasha ah, maxaa uu Axmed Maxamed Siilanyo uu 82 cod u diiday inuu dalka mudahaarad uga rido oo u yidhi kursi dhiig ku daadtay ku fadhiisanmaayo, balse uu gudoomiya Cabdiraxamaan Ciro isagoo guul ka dheer tahay ugu tudhi waayey dalkiisa iyo dalkiisa?
Maddaxwayne Axmed Maxamed Siilanyo waa halyey dalkiisa guusha u horseeday oo intuu dalka haystay horumar balaadhan u horseeday. Horumarkaasi waxaa kow ka ah isagoo la dagaalamay musuq-maasuqii baahsanaa ee dalka ka jiray, taaso sanadkii ugu horeeyey oo kaliya kor ugu qaaday miisaniyaddii dalka in ka badan $100 million oo doolar. Ku darso horumarka uu ku talaabsaday, waxa markhaati ka ah wasaaraddihii dalka oo dhismaayal cusub ku wareegay oo loo dhisay iyo iyagoo shaqaalahooggii kordhiyey 75% (Wasaarada Qorshaynta iyo Horumarinta Qaranka). Ka gudub, waxaa dalka laga hirgaliyey wadooyin aad u far badan oo magalooyinka waawayn ee sida caasimada Hargeeysa ka mid tahay bilcdooddii aad u badalay. kuwaasi waa tusaale korka xaadis u ah, horumarka uu dalka ku talaabsaday intuu caynaanka hayey maddaxwaynahu.
Horumarkaasi uu dalka u horseeday bogaadin iyo hamabalyo ayuu ku mutaystay. Wax ah wax lalayaabo in Xisbiga Waddani oo uu adeegaya danaha cadowga Somaliland ay horumarkaa iftiinka cadadeed ah ay yidhaadaan sacabadiina ku qariya. Waxay badiba si aan gabsho iyo edaabta siyaasadu ka ma dhan tahay (political ethics) oo meel kadhac ku ah qaranka iyo sharfta shakhsi kast oo Soomaliland hadal qaawan oo cay iyo af-laagada ah maddaxwaynaha maalin kasta saxaafada u mariyaan. Hadaad raadka Waddani aad gurto, waxa uu afka dalaq kaga galinyaa cadowga Somaliland oo fariimahaasi masuuliyinta Waddani faafiyaan u soo yeedhiy. Rag badan oon ku jiro ayaa ka baxay markay arkeen halistaa jiifta ee Waddani ee dadkeenu anay waxba ka ogayn.
Xisbiga waddani ma ahi qofkii ugu horeeyey ee shacbiga u daahfura siyaasadiisa qarsoon ee halista ku ah jirtaanka Somaliland. Xisbigaasi xubno aad ugu dhadhaw gudoomiyahiisa ayaa isga dab qaadayey, dalka aynu jaarka nahay ee Soomaaliya, Jaamacada Carbta, Jabuuti iyo Turkiga. Warysigii uu Wasiirkii hore Arrimaha Guddaha ee Somaliland, Mudane Maxamed Nuur Caraale (Duur) la yeeshay Horn Cable TV, ayaa waxaa lagu waydiiyey inay jiraan argtiyo isa soo tarya oo sheegaya in Waddani xidhiidhi hoose la leeyahay dawlada Xasan Sheekh Maxmuud? Jawaabta uu bixiyey siday doonta ha ahate waxay xaqiiqadu tahay tuhunkaasi inuu aad u sii xogaysanayay (evidence) marka aad sii raad racdo ficilada xisbiga Waddani ee aan u tudhayn shacbiga dan yarta ah ee ku sifoobeen ee ah cad yahow ku cunay ama kuciidayey, waa mid afartaa dal ee aan kor ku xusnay dabada ka riixayaan oo doonaya inay Somaliland dib ugu soo celiyaan Soomaliya iyo Xasan Sheekh Maxamuud.
Waddani mudaharaadaddii uu ku baaqay waxay ahayeen kuwa qorshaysnaa oo dalka fidno xasilooni daro looga abuurayey si loogu khalkhal galiyo amaanka iyo nabadgalyada oo dalkan lagu soo casumo ciidamada Amson ee ka yimid dalka HIV/AIDS afeeyey. Taaso khasbtay si dadka Soomaalida khatarta kaga soo fool cudurkaasi ay WHO (World Health Organisation) oo ka hesha gargaar dhaqaale hayada la yidhaa Golobal Fund for HIV/AIDS and Tuberculosis, ay sanadadii ka horeeyey 2008 Condoms soo gala Soomaaliya oo ahaa 300,000 ilaa 400,000 ay gaadhsiisay sanadkii 2013 ilaa 1,300,000 xabo si halista cudurka HIV/AIDs uga badbaadiyaan dadka Soomaalida ee ay askartaasi faafin karto (UNAIDS, 2013). Waxase boogaadin mudan shacabka geesiyinta ah Somaliland ee ugu horeeyaan kuwa caasimada magaalada Hargeeysa oo dhagaha ka furaystay I soo biixi uu ku baaqay Xisbiga Waddani ee ay dabada ka riixayeen dawlado dano gaar ah inaga leh.
Gunaanaadkii maqaaalkan, waxaa jawaabta suaasha uu soo kiciyey ay tahay in Mudane Axmed Maxamed Siilanyo ay qalbigiisa ku xusan tahay, geesiyaashii u shihiiday qaranimada Somaliland iyo kumayaalkii kun ee shacbiga ahaa ee la xasuuqay iyo kuwii cudurada iyo gaajadu ugu leedaya xeryaha qaxootiyada. Daamirkiisuna u saamixi waayey isagoo lagaga helay 82 cod in halyayadii naftooda u sadqeeyay qaranimada qaranka iyo shacbiga Somaliland halgaanka qadhaadh u soomaray dib u helida xoriyadooda inuu nolasha ka ciideeyo. Balse gudoomiyah Xisbiga Waddani anu halgankaasi taariikh ku lahayn, waayihii shacbigu soo marayna ay sheeko xariir ku tahay. Taas bay tahay ta kala saaraysa labadan masuul inuu midna dalkii u tudho midna uu yidhaa dabka ayaan saaray. Maanta banaabax uu ku baaqay ay tahay mid uu isagu dhagta dhiiga isku daray. Burcana fariinta aan u dirayaa markale ay tahay inay qabyaalada ka korto, mar kale fariin aan Buro diraya Sanadkii 2013, Guji halka http://caynabanews.com/articles/35865/Burco-Magaalo-Qashinka-Qabyaaladu-Dhalan-Rogay
Ahmed Abdi Isse, UK
Please email me your thoughts on this article directly to: isseahmed@hotmail.com